Dowladda Mareykanka oo war-saxaafadeed kasoo saartay xiisadaha ka dhex taagan Galmudug iyo Puntland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Mareykanka oo war-saxaafadeed kasoo saartay xiisadaha ka dhex taagan Galmudug iyo Puntland
Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeeysay shaaca ka qaaday inay walaac aad u xoogan ka qabto murankii ka dhashay duqeyntii ay diyaaradahooda dagaal bishii September 28-keedii u geysteen deegaanka Jeexdin ee duuleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
War-saxaafadeed kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu walaac ka qabo islamarkaana uu ku baraarugsan yahay wararka la xiriira khasaarihii ka dhashay weerarkii Gaalkacyo, islamarkaana uu eedeymaha noocaasi ah qaadanaayo, ayna weli qiimeyn ku haayaan dhamaan cadeeymaha macquulka ah.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Danjiraha Mareykanka u jooga dalka Soomaaliya uu bishaan October 6-deedii, 7-dii iyo 8-dii kulamo kula yeeshay magaalada Muqdisho odayaasha qabiilka, bulshadda iyo madaxweynaha Galmudug C/kariim Xuseen Guuleed.
Waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in Danjiraha Mareykanka wada-sheekeysi muhiim ah la yeeshay madaxweynaha maamulka Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas iyo taliska ciidanka qaranka Soomaaliya ee SNA.
Danjiraha ayaa tilmaamay in Mareykanka ay doonayaan in la xiriiriyo iskaashiga iyo isgaarsiinta ay la-leeyihiin ciidanka maamulka Galmudug iyo kuwa Qaranka Soomaaliya, si loola dagaalamo dagaalyahanadda Al-shabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
Ugu dambeyntii, war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa si xoogan loogu dhiiri-geliyay maamullada Galmudug iyo Puntland inay qaadaan wada-xaajood muhiim ah, si loo xaliyo kala-qeybsanaanta weli taagan iyo in la abuuro xaalad nabadeed iyo dib u heshiisiin rasmi ah.